Amahobe - 科萨语 - 英语 翻译和实例
您搜索了: amahobe (科萨语 - 英语)
Ngomhla wesibhozo maze azise amahobe amabini, nokuba ngamagobo amabini evukuthu, kumbingeleli emnyango wentente yokuhlangana.
ngomhla wesibhozo azithabathele amahobe amabini, nokuba ngamagobo amabini evukuthu, awazise kumbingeleli emnyango wentente yokuhlangana,
Ngomhla wesibhozo wozithabathela amahobe amabini, nokuba ngamagobo amabini evukuthu, eze phambi koYehova emnyango wentente yokuhlangana, awanike umbingeleli;
Ukuba ke isandla sakhe sithe asaba nakuwafumana amahobe amabini, nokuba ngamagobo evukuthu amabini, wozisa umsondezo wakhe lowo wonileyo, ube sisahlulo seshumi se-efa yomgubo ocoliweyo, ube lidini lesono, angabeki oli phezu kwawo, angabeki ntlaka imhlophe phezu kwawo; kuba lidini lesono elo.
Ke ukuba isandla sakhe sithe asaba nakufumana nto ilingana nemvana, wothabatha amahobe abe mabini, nokuba ngamagobo evukuthu abe mabini, elinye libe leledini elinyukayo, elinye libe leledini lesono, umbingeleli amcamagushele, aze ahlambuluke ke.
Ukuba ke isandla sakhe sithe asaba nakuyifumana into elingana netakane, wozisa kuYehova idini letyala lakhe one ngalo, amahobe amabini, nokuba ngamagobo evukuthu abe mabini, elinye libe lidini lesono, elinye libe lidini elinyukayo.
aavjo (古吉拉特语>英语)equity (英语>尼泊尔语)n' arrête jamais de rêver (法语>英语)rudi (英语>西班牙语)walang masakyan papuntang manila galing batangas (他加禄语>英语)you are handsome (英语>僧伽罗语)ngogwe in english (斯瓦希里语>英语)mechele (荷兰语>英语)treats (英语>马来语)c est vache comme il pleut (法语>西班牙语)soveltamisala (芬兰语>丹麦语)familjehuvudmän (瑞典语>俄语)no perdon (西班牙语>英语)seduce meaning (英语>他加禄语)to play hell (英语>俄语)bellagio (英语>俄语)gedachte (荷兰语>印尼语)saints (英语>越南语)show me your breasts (英语>意大利语)esterifikované (捷克语>意大利语)kya aap meri help kar sakte ho (印地语>英语)tidak berbaloi (马来语>简体中文)turnaround (英语>荷兰语)biji selasih (马来语>英语)tagalog kapampan (英语>他加禄语)